🥇 ▷ Twitch iyo kordhinta cusub ayaa kaa caawinaya inaad si fiican u fahamto League of Legends ✅
Twitch iyo kordhinta cusub ayaa kaa caawinaya inaad si fiican u fahamto League of Legends
Twitch iyo aalado cusub oo kaa caawinaya LoL
League of Legends waa ciyaar aad u adag, in kasta oo ay u muuqato mid fudud marka hore. Saldhigyadu waa wax aan ka badnayn laba kooxood tartamada oo ay tahay inay meesha ka saaraan waxa loo yaqaan horyaal (dabeecad leh kartiyo kala duwan) iskuna dayaan inay gaaraan shuruudaha guusha ee guud ahaan la xiriira burburka dhismaha. . Maamulaha koox kasta. Laakiin ha jah wareersan, waxaa jira faahfaahin badan oo ugu dambeyntii kaa dhigaya yaab “Halkeen ka raadsadaa ciyaaraha LoL?”.
Si looga gudbo dhibaatadan ka horjoogsata in ka badan hal qof inuu bilaabo inuu ciyaaro ama uun fahmo cayaaraha dhaliya xiisaha badan ee tartamada kala duwan, Twitch ayaa soo saaray kordhin oo bixisa macluumaad faahfaahsan ee ciyaar kasta waqti kasta, waa la yiraahdaa League of Legends Live Tracker.
Weligaa ma arkin ciyaar sidan oo kale ah.
Toddobaadka firfircoon ee toddobaadlaha ah ‘Twitch’ Sii wad iyadoo la bilaabayo Kordhinta Live Tracker Extension, hab cusub oo loogu noolaado nolol iyo isweydaarsi shuruudood oo loogu talagalay ciyaaraha LoL. Wixii faahfaahin ah ka ogow https://t.co/n02mYycWon. pic.twitter.com/AFuLz0L6TF
– Twitch (@Twitch) Febraayo 20, 2020
Waad ku mahadsan tahay taas, marka gudbiyaha gudbiya ciyaarta uu ku rakibo, daawadaha wuxuu ku yeelan doonaa gudi is dhexgal oo ku dhexjira ciyaaryahanka. Twitch macluumaad faa iido leh si aad u fahamto horumarkiisa. Marka, tusaale ahaan, waad arki kartaa sida isbeddelka horyaalnimada uu u dhacay, sida ay u kala horreeyaan awoodooda, waxyaabaha ay iibsadeen ama adeegsadeen, iwm.
Macluumaadkan oo dhami waa inay u adeegaan oo caawiyaan kuwa isku dayaya inay bilaabaan ciyaarta oo aan laheyn caawimaad badan oo ku saabsan fahamka qayb kasta Kuwaasoo, sida aan soo sheegnay, ay umuuqan karaan wax fudud, laakiin waxay ku lug leeyihiin dhibaatooyin badan oo dad badani ay moodaan. Gaar ahaan marka cayaaraha la muujiyo inta u dhexeysa isticmaaleyaasha heerka sare ah ee sameeya waxqabadka xawaaraha aad u sarreeya.
Kordhintan cusub ee Twitch League of Legends ayaa hadda ku jirta xaalad beta furan. Taasi waxay ka dhigan tahay qof kasta oo ciyaara LoL oo dib u baahiyo isagoo adeegsanaya barta Twitch Waad isticmaali kartaa, in kasta oo aysan macnaheedu ahayn inay khaladaadku muuqan karaan inta lagu jiro muujinta macluumaadka ama dhaqanka aan caadiga ahayn. Hadana, waa ikhtiyaar fiican oo lagu kobcin karo khibradaha dadka daawanaya ciyaaraha iyagoo madal kusocda. Wax ay kumanaan adeegsadeyaashu maalin walba sameeyaan.
Isaga rakibi oo u isticmaal fidintaan loogu talagalay League of Legends Kaliya waxaad u baahan tahay inaad aado bogga dheereynta ee ‘Twitch’, galid oo waad kala soo bixi kartaa oo ku rakibi kartaa kumbuyuutarkaaga. Waxaa lagu heli karaa luqado kala duwan, Ingiriisiga ilaa Faransiiska, Jarmalka, Isbaanishka iyo kuwa kale oo badan. Shuruud ahaan, waa inaad sidoo kale rakibatid Codsiga Twitch ee miiska in aad kala soo degsan karto halkan.